musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » India Inozivisa Kwakakura Kukura muDrone Chikamu
avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • India Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi
Kutora rimwe danho rekuzadzikisa chiratidzo cheAatmanirbhar Bharat, Hurumende yeCentral iri pasi pehutungamiriri hweIndia Prime Minister Shri Narendra Modi, yaburitsa mepu yeIndia yemuchadenga yekushanda kwedrone.
Kugadziriswa kwemitemo mudrone airspace kuchabatsira kukura kwakanyanya-kwakajairika mune iri kuuya chikamu chedrone kuIndia.
Drones anopa makuru mabhenefiti kune angangoita ese zvikamu zvehupfumi.
Tichifunga nezve simba rayo rechinyakare mune hunyanzvi, ruzivo rwehunyanzvi, hunyanzvi hwekuchengetera mari uye kudiwa kwayo kukuru mudzimba, India ine mukana wekuve nhare yedrone yepasi rose na2030.
Iyo mepu yemuchadenga yemhepo inouya sekutevera-kuburikidza neyakaregedzwa Drone Mitemo, 2021 yakaburitswa neCentral Government muna Nyamavhuvhu 25, 2021, chirongwa chePLI che drones chakaburitswa munaGunyana 15, 2021, uye neGeospatial Data Guidelines yakapihwa muna Kukadzi 15, 2021. Idzi shanduko dzese dzemitemo dzinozoita kuti hukure hwakanyanya-hwakajairika mudunhu riri kuuya redrone.
NEI MADHONI ANOKOSHA?
Drones anopa makuru mabhenefiti kunenge zvikamu zvese zvehupfumi. Izvi zvinosanganisira asi hazvirevi kurima, kuchera, zvivakwa, kuongorora, kupindura nechimbichimbi, kutakurwa, mepu yenzvimbo, dziviriro, uye kutevedzera mutemo kudoma vashoma. Drones anogona kuve akakosha ekugadzira emabasa uye kukura kwehupfumi nekuda kwekusvika kwavo, kuita kwakawanda, uye nyore kushandisa, kunyanya munzvimbo dziri kure dzeIndia uye dzisingasvikike.
CHII CHINONYANYA KUKONZESA IYA DHONI DZINOTANGA?
Nekuda kwemitemo mitsva, iyo drone PLI scheme uye yakasununguka inowanika drone mamepu emuchadenga, iyo drones uye drone yezvigadzirwa indasitiri yekugadzira inogona kuona kudyara kweinopfuura INR 5,000 crore mumakore matatu anotevera. Mari yekutengesa yegore negore yedhiraini yekugadzira yedrone inogona kukura kubva paNR 60 crore mu2020-21 kupeta kusvika pamusoro peNR 900 crore muFY 2023-24. Iyo indasitiri yekugadzira dhoni inotarisirwa kuunza pamusoro pezviuru zviuru zvemabasa akanangana mumakore matatu anotevera.
Iyo indasitiri yemasevhisi edrone, ayo anosanganisira mashandiro, mepu, kuongorora, agri-spraying, logistics, data analytics, uye software yekuvandudza, kutumidza vamwe, ichakura kusvika padanho rakakura. Inotarisirwa kukura kupfuura INR 30,000 crore mumakore matatu anotevera. Iyo indasitiri yemasevhisi yedrone inotarisirwa kuunza pamusoro pe500,000 mabasa mumakore matatu.
Mepu yemuchadenga yemabasa edrone inowanikwa pa DGCA yedhijitari yedenga chikuva.